Shacabka Ghana oo u codeenaya Madaxweyne iyo Baarlamaan cusub • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shacabka Ghana oo u codeenaya Madaxweyne iyo Baarlamaan cusub
Shacabka Ghana oo u codeenaya Madaxweyne iyo Baarlamaan cusub
December 7, 2012 - By: Khalid Yusuf
Taageerayaasha Xisbi Xaakimka Ghana ee NDC
Maanta oo Jimce ah ayey shacabka wadanka Ghana u dareereen goobaha codbixinta, ayagoo u codeyn doona Madaxweynaha iyo Baarlamaanka cusub ee uu dalkaasi yeelan doono.
Doorashada ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya xisbiyo kala gedisan, balse tartanka ugu weyn ayaa wuxuu ka dhaxeeyaan labada xisbi ee dalkaasi ugu waaweyn ee NDC iyo NPP.
Madaxweynaha Ghana John Dramani Mahama ayaa hogaaminaya xisbigiisa NDC , halka ninka la loolamaya Mr.Nana Akufo-Addo uu hogaaminayo xisbiga NPP.
Labadan xisbi ayaa si weyn ugu loolamay doorashadii ugu danbeysay ee dalkaasi ka dhacday 2008dii, xiligaasi oo uu xisbiga NDC uu doorashada ku guuleystay codod ka yar 1%.
Nana Akufo-Addo oo ah 68 jir isla markaana hogaaminaya xisbiga Mucaaridka ee NPP ayaa asagu sheegay in xiligan ay ayagu guusha raaci doonto.
Madaxweyne John Dramani oo asagu 54 sano jir ah, ayaa asagu xilka ku imaan doorasho balse wuxuu xilka qabtay bishii July kadib markii uu geeriyooday Madaxweynihii hore ee dalkaasi John Atta Mills oo in muddo ah xanuunsanayey.
Madaxweyne Dramani ayaa ku tashanaya taageerada xisbigiisa uu heysto, asagoo rajo fiican ka muujiyey in markale ay hogaanka u qabtaan dalkaasi Ghana.
Wadanka Ghana ayaa kamid ah wadamada ugu degen qaarada Afrika dhanka siyaasada iyo dhaqaalaha, wuxuuna wadankan sanadkii 2010 markii ugu horeysay bilaabay soo saarista shidaalka oo lagu wado in ay sii xoojiso dhaqaalaha dalkaasi. Wadanka Ghana ayaa sidoo kale soo saaran Dahabka.
Shacabka Ghana ayaa isla maanta dooran doona Baarlamaanka cusub ee wadanka Ghana oo ka kooban 275 kursi, waxaana sidoo kale filayaa in labada xisbi ee NDC iyo NPP ay helaan kuraasta ugu badan ee golaha Wakiilada.